Uyemukelwa kudeskithophu ye-semantic: Ithrekhi yebhonasi: Ukusatshalaliswa! | Kusuka kuLinux
Mayelana nochungechunge lwe-KDE athikili (ingxenye 1, ingxenye 2, ingxenye 3, ingxenye 4, ingxenye 5, ingxenye 6 y ingxenye 7), Ngifaka izinto eziningi kokunye ukuphawula okufanelekile ukuba khona ku-athikili ehlukile, ngakho-ke nazi ezinye izeluleko zokusatshalaliswa okuhlukile esingaba nakho.
Masikhumbule: ezimweni eziningi ukusatshalaliswa okuhle kakhulu kwe-KDE yilokho onakho, kepha kunezinkinga ezithile ezinzima ngeziningi zazo, ngakho-ke umqondo, ngaphezu kokwazi ukuthi yini okumele ukhethe nokuthi yini okufanele uyigweme, yindlela yokwenza ukusatshalaliswa lowo usebenze kahle nge-KDE.
1 I-Debian? Cha
2 UMageia? I-PINK
4 Ukukhishwa kwe-rolling? Ayikho inkinga.
5 I-Fedora, i-RHEL, i-CentOS
IDebian Sid, indawo engazinzile yakwaDebian, ine-KDE 4.8.4 njengenguqulo yakamuva etholakalayo. Lokhu kunikeza umbono wokuthi iDebian iphelelwe yisikhathi. Kunengqondo, futhi kulindelwe nokuthi, ukucela isitebela sakwaDebian ukuthi sibe nenguqulo endala, evivinyiwe nazo zonke izimbungulu zilungisiwe, kepha ukuba nenguqulo endala enjalo endaweni engazinzile kudelela ukuqonda kwabantu. Njengoba sizobona ngokuhamba kwesikhathi, kunendlela esemthethweni yokufaka i-KDE 4.10.2 kuRed Hat Enterprise Linux, ukusatshalaliswa okuzinzile noma okuzinzile kuneDebian Stable uqobo.
Uma ufuna ngempela ukufaka i-Debian nge-KDE, izinketho ezimbili ezitholakalayo yilezi:
1. Letha izinqolobane zeZevenOS ekuhlolweni kweDebian. Angazi ukuthi le nketho ihlala isikhathi esingakanani noma ihambelana kangakanani. Kufanele bangeze le migqa emibili ku /etc/source.list.
Ngemuva kwalokho, ukufaneleka kufanele kusetshenziselwe ukuvuselela amakhosombe nokuvuselela.
ukufaneleka ukufaka i-kde-workspace
2. Shova amakhosombe kaDebian okuhlola. Ukudumala okusha lapha: umuntu angalindela ukuthola, endaweni yokugcina yokulinga ngempela, izifinyezo ze-KDE zamasonto onke ze-git (okuyilokho okwenziwa yi-OpenSuSE ngeFektri), noma okungenani i-beta ye-KDE 4.11, kodwa cha, umuntu akatholi okungaphansi noma okungaphansi kwe-KDE 4.10.4 .XNUMX, inguqulo ezinzile impela. Inkinga ukuthi amaphakheji amaningi wokuhlola we-Debian ancike kuzinguqulo ezingazinzile zamanye amaphakheji, ngakho-ke kufanele uphathe ngokucophelela okubalulekile kwemigqa yedebhu ku /etc/source.Slackwarelist bese ufaka i-KDE ngesandla njalo uma uthuthuka. Angikukhuthazi.
Inkinga ngeMageia iyafana nokusatshalaliswa okuningi, nakuMandriva: uma sebekhiphe inguqulo ye-KDE, bahlala nayo unomphela. Lokho kusho ukuthi: uma iMageia 3 iphuma ne-KDE 4.10.2 kunzima impela ukuthi ithuthukisele ku-KDE 4.10.3, noma ku-KDE 4.10.4.
Kwenzeka kimi noMandriva ukuthi kufanele ngiye "eMandriva International Backports" ukuthola ukuvuselelwa kwephuzu, futhi iqembu elingemuva kwe-MIB linqume ukungasekeli iMageia, kepha lifudukele eROSA Linux. Ngakho-ke uma kukhulunywa ngomndeni wakwaMandriva, iROSA Linux iyona engakhetha iMageia, futhi ngincoma kakhulu uhlobo olusha lweDesktop R1. Uma umusha ku-KDE, uzomangala.
Izinga lamaphakeji aqhamuka eqenjini leMandriva International Backports lihle, kepha njengoba ngishilo, amaphakheji abo ahambisana kuphela neROSA Linux. Ukungeza le ndawo kulula kakhulu: iya ku-http: //urpmi.mandriva.ru/ bese uqhafaza lapho ithi "MIB". I-EasyURPMI izonakekela konke okunye.
Ukusatshalaliswa kukaPatrick Volkerding, yize enedumela lokuzinza, futhi angalokothi abe namaphakeji wakamuva, kuhle kakhulu ku-KDE. Kunezinketho ezimbili.
1. I-Slackware-current inguhlobo lokugoqa lweqiniso, njenge-Arch. Uma uthanda ukungazinzi, kuphelele, kepha uma kungenjalo, bheka okulandelayo.
2. U-Eric Hammeleers uhlanganise indawo yokugcina ekhethekile enezikripthi ezintsha zeSlackbuild ezigcwele i-KDE 4.10.4, ephelele ukuhlanganisa ukuzinza kweSlackware 14 ngamandla e-KDE. Kufanele ufake amaphakheji amabili kuqala:
Ngemuva kwalokho, imithombo iyalandwa futhi ihlanganiswe nombhalo ohlinzekiwe weSlackBuild.
i-rsync -av rsync: //alien.slackbook.org/alien/ktown/source/4.10.4.
Linda isikhashana bese une-KDE 4.10.4 ekulungele ukufaka. Lokhu kungasetshenziswa kuphela kuSlackware 14.
Ukukhishwa kwe-rolling? Ayikho inkinga.
Izinhlobo zangempela zokugoqeka, ezinjenge-Arch Linux, nalezo ezitholakala ku-Arch (Manjaro, Chakra) azidingi iziyalezo ezingeziwe. Kalula, uma i-KDE ingafakwanga ngokwakhona, ifakwa ngomyalo olula.
Naka i-wiki yokusabalalisa: kungahle kube ukuthi kunezinkinga ezibangelwe ukungabi bikho kokuphindisela, kepha imiyalo izohlala ikhona. Khumbula: ukusebenzisa i-Arch udinga ukuthi ufunde ikhasi njalo, ulandele imiyalo, futhi uvuselele njalo. I-Arch ingaphuka kalula uma uyiyeka ngaphandle kokuyibuyekeza izinyanga ezimbalwa bese uyibuyekeza ngokungazelelwe.
Okufanayo kuyasebenza nakuGentoo, noma kunjalo iphakethe langempela le-debunking orgy liyadingeka lapho.
I-Fedora, i-RHEL, i-CentOS
Akukaze kube umqondo omuhle ukusebenzisa i-Fedora ecacile nelula nge-KDE. Kuhlala kudingekile ukuya ku-http: //kde-redhat.sourceforge.com bese wenza kusebenze i-Yum repository evela lapho. URex Dieter, umholi weqembu leFedora KDE, wenza umsebenzi omuhle wokufaka i-KDE patching, kepha awuboni okuningi kwayo ngoba imvamisa kuthatha isikhathi eside ukuthi amaphakheji ayo afinyelele ekhosombe eliyinhloko.
Into ephawuleka kakhulu ukuthi kusuka lapha unga-oda amaphakheji we-KDE 4.10.2 we-RHEL, ukusatshalaliswa okwaziwa ngokuzinza kwaso okungenangqondo nangobudala bamaphakeji aso. Sikhuluma lapha nge-distro kuphela engakwazi ukubhekana ngempela ne-Debian Stable, ngakho-ke uma sisebenzisa i-KDE, inketho yi-RHEL, noma enye into efana ne-Scientific Linux, noma kunjalo. Udinga kuqala ukusebenzisa i-EPEL (Amaphakheji Anwetshiwe we-Enterprise Linux, indawo yokugcina esemthethweni enamaphakeji weFedora ahlanganiselwe i-RHEL) bese usebenzisa le miyalo.
cd / njll / yum.repos.d
Ake sihlele ifayela okukhulunywa ngalo bese sishintsha yonke imigqa ethi "enabled = 0" to "enabled = 1". Yebo, i-KDE 4.10.2 imakwe njenge- "engazinzile", kepha sengeza i-KDE 4.10.2 ekusatshalalisweni ngamaphakeji asephelelwe yisikhathi kune-Debian Wheezy, ngakho-ke kufanele siqaphele. Ngemuva kwalokho, i-classic Fedora / RHEL combo.
Sizobona ukuthi i-KDE 4.3 (indala kakhulu) ithathelwa kanjani indawo yi-KDE 4.10 ezinze ngempela. Manje kuyintokozo ukusebenzisa lezo zinhlelo ezikhethekile zokulingisa i-physics ye-physics kusuka ku-Scientific Linux.
KuFedora inqubo ifana ngokweqile, kepha okuhlukile yizinhlobo ezitholakalayo.
Ngalesi sikhathi masingashintshi yonke imigqa "enikwe amandla = 0" yaya ku- "enabled = 1", kepha ake sibheke ngokucophelela. [kde-engazinzile] lapha izosinika i-KDE 4.11 beta 1, inguqulo engazinzile ngempela. [i-kde-testing] izosinika inguqulo yamaphuzu azinzile yakamuva ye-KDE ngaphambi kwezinqolobane ezisemthethweni zeFedora. Futhi i- [kde] isikhathi esiningi izobe ingenalutho. Masishiye ifayela le-kde.repo njengoba linjalo, noma uma sifuna ukungazinzi ngempela, masivule i- [kde -stable].
Ama-Distros alahlekile, ngakho-ke kuzoba nengxenye yesibili yalo mhlahlandlela. Ngizokubona.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Uyemukelwa kudeskithophu ye-semantic: Ithrekhi yebhonasi: Ukusatshalaliswa!
Ngiwulandele ngokuphelele umhlahlandlela kusukela ekuqaleni futhi manje ngisebenzisa ideskithophu ye-semantic ene-chakra futhi ngijabule ngayo.
UWilliam moreno kusho
Kungani uthi akuwona umqondo omuhle ukusebenzisa iFedora ngqo ne-KDE?
Phendula uWilliam Moreno
Ngisebenzise i-KDE ingunaphakade futhi angikaze ngisebenzise lokhu kusuka kudeskithophu ye-semantic. Angicabangi ukuthi ngingedwa.
Ngisebenzisa i-KDE futhi angikaqondi i-semantic desktop xD
Bekungaqondakali kahle, kepha isizathu ukuthi: ngoba amaphakheji anezibuyekezo zakamuva athatha isikhathi eside ukufinyelela ezinqolobaneni zeFedora. I-KDE, ngokungafani nezinye izindawo, igcina umthetho othi "okusha kungcono". Ngakho-ke ngenkathi iFedora "ingasebenza" ezinqolobaneni zesitoko, kungcono ukusebenzisa i-kde-redhat futhi ujabulele isipiliyoni esigcwele. I-Plus Rex Dieter ngokungazelelwe ifaka izinto ezipholile kuleyo nqolobane ozoyiphuthelwa uma ungayisebenzisi.
Bona yonke eminye imikhombandlela 🙂
Nakanjani ngizokwenza 😀
Kulokho okushoyo nge-Debian Sid, ngicabanga ukuthi unikeza umbono ongalungile.
1- Okokuqala, kungekudala noma kamuva i-KDE 4.10 noma i-KDE 4.11 izofika ku-Debian Sid, bese ku-Debian Testing. Njengoba kushiwo, kubonakala sengathi uDebian Sid uzohlala ehlala ne-KDE 4.8.4, futhi akunjalo.
2- Ngicabanga ukuthi ngifunde kolunye uhlu lwamakheli (kudala, ngakho-ke angikwazi ukubeka isixhumanisi), ukuthi isizathu sokulibaziseka ekuvuseleleni i-KDE inguquko isuka ku-KMail 1 (isetshenziswe kuze kube yi-KDE 4.9) iye ku-KMail 2 (esetshenziswe ku-KDE 4.10): bafuna ukuqiniseka ukuthi alukho ulwazi lomsebenzisi noma ama-imeyili alahlekile kuleyo nqubo.
Esikhathini esithile esidlule ngafaka i-KDE 4.10.2 ngidonsa indawo yokugcina yokulinga, futhi yangisebenzela kahle ekuqaleni. Inkinga ebenginayo ngenkathi ngisebenzisa i-Nepomuk Cleaner, lapho kudlule okokuqala kunganikanga zinkinga, kepha kowesibili ishiye ama-imeyili ami engafinyeleleki. Ngenhlanhla, ngenze isipele, futhi ngafaka kabusha i-Debian Testing ukulinda buthule i-KDE 4.10.4 ukuthi ifike endaweni yokuhlola.
UFabian Eduardo kusho
Nginenkinga elandelayo yokufaka i-kde repo ku-fedora:
Ukuxazulula apt.kde-redhat.org (apt.kde-redhat.org)… 129.93.181.6
Ixhuma ku-app.kde-redhat.org (apt.kde-redhat.org) [129.93.181.6]: 80… yehlulekile: Uxhumano lunqatshiwe
Phendula uFabián Eduardo
Uzoqonda ukuthi ngemuva kokuxoxa ngeminyaka edlule noFathi Boudra, umphathi omkhulu we-Debian KDE, mayelana nokuthi iStrigi kufanele ihlanganiswe kanjani, angizange ngithole ukubonakala okuhle kakhulu kokuthi izinto zenziwa kanjani eDebian. Ngokwazi kwami, abakwaDebian basebenzisa izinqolobane ezi-4 eziyisisekelo: zokuhlola (alikho igama), ezingazinzi (Sid), Ukuhlolwa kweDebian (Jessie) neDebian Stable (Wheezy).
Njengoba ingazinzi njengokuphathwa kwe-imeyili, okuyindlela elungiswe ngokulungiswa okungabonakali okukhulu kwe-Akonadi IMAP okwenzeke phakathi kwe-KDE 4.10.1 ne-KDE 4.10.3 (yebo, lelo phutha lalibucayi, yingakho kwakufanele ukulungiswa okukhulu kuzinguqulo zamaphoyinti) , I-KDE 4.10 bekufanele NJALO ukuthi ibiseSid, ukuze ukulungiswa kuphele ekuVivinyweni (nge-KDE 4.8 ngesitayela se-Debian) futhi kuye kuJessie. Ukungazinzi ku-Debian "akuzinzile"; Ayizinzile njengeDebian Stable, kepha izinzile kancane, futhi lokho akugcwaliseki lapha.
Iqiniso ukuthi i-Debian ayigcini, noma ayifaki i-KDE kahle. Kungakho lezi zinto zenzeka, yingakho ngifuna ukushiya isexwayiso esimelene noDebian.
Iphutha: hhayi http://kde-redhat.sourceforge.com; kuyinto
Yebo. Sebenzisa isibuko http://kdeforge2.unl.edu/kde-redhat/ (buyisela i-app.kde-redhat.org kufayela le-kde.repo ngalelo kheli)
Ngokwazi kwami ​​isebenzisa i-oldstable (cindezela), izinzile (wheezy), ihlola (jessie) futhi ayizinzile (sid) futhi ngivumelana ngokuphelele nawe ngokusebenzisa isoftware yakudala. Ngendlela, emizuzwini embalwa ngizoyifaka le kde kwi-wheezy yami, ungifisele inhlanhla! i-xD
ekugcineni ngivuselele ukuhlolwa kodwa ayilayishi i-gmd3, kuzofanele ngihlehlise i-kde lapho ngiyilungisa xD
I-LXDE-Qt: Oxhumana naye wokuqala